Valve Motorized, Pneumatic Actuator Valve & Solenoid Valve Production
Dhaqdhaqaaqa Korontada Valve
Valve Kubadda Korontada
Valve Balanbaalista Korontada
Matoorka Kubadda Walalka Yaryar
Korantada Albaabka Valve
Korantada Globe Valve
Valve Control Electric
Dhaqdhaqaaqa Pneumatic Valve
Valve Balanbal Pneumatic
Albaabka Mindida Pneumatic
Kursiga Xagalka Pneumatic
Ujeedada Guud ee Solenoid Valve
Valve Solenoid aan biyuhu lahayn
Heerka Raashinka Solenoid Valve
Heerkulka Sare ee Solenoid Valve
Cadaadiska Sare ee Solenoid Valve
Solenoid Valve ee ka-hortagga daxalka
Solenoid Valve oo leh saacad
Solenoid Valve oo aan qarxin
Valve Balanbaalista gacanta
Valve Ball gacanta
Cadaadiska Yareeya Valve
Kala saarida hawada
Buugta & xaashida xogta
Ku saabsan COVNA
Hiigsiga & Himilada
Aqoonta Ku Saabsan Valves
Khabiir ku takhasusay Valve Automated
Bixinta xal hal-joog ah oo waalka ah si aad u buuxiso baahiyahaaga waalka
HALKAN KA HELO
Xalka waalka otomaatiga ah ee hal-jooga ah si uu u buuxiyo baahida waalka.
Taxanaha Qulqulka Hawada Pneumatic ee COVNA
Xalka waalka otomaatiga ah ee hal-jooga ah si uu u buuxiyo baahida waalka
COVNA Multi-Turn Actuator Valve Taxanaha
Xalka waalka otomaatiga ah ee hal-jooga ah si uu u buuxiyo baahiyahaaga waalka
Bixinta dhammaan noocyada Valves-ka firfircoonida ee doorashadaada
Valves-ka Dhaqdhaqaaqa Korontada
COVNA valve actuator koronto oo laga heli karo kubbadda / balanbaalista / albaabka / noocyada valve si ay u daboolaan baahiyahaaga valve
Qulqulka Pneumatic Actuator
COVNA valves actuator pneumatic ayaa diyaar u ah soo celinta guga iyo kiciyeyaasha nooca labajibbaaran ee baahiyahaaga firfircoonida
Dhaqdhaqaaq toos ah
Dhaqdhaqaaqa iswada ee COVNA oo laga heli karo kiciyeyaasha korantada iyo kuwa sambabada sambabada ah ee baahidaada firfircoonida
Maxaad u doorataa COVNA VALVES?
Si aad u noqoto Soosaaraha hormuudka ah ee Actuator Valve
Taxanaha Alaabooyinka oo Dhamaystiran
Adeegga Customization Valve
Adeegga Iibka-Stop-ka ah
Taageerada Farsamada iyo Warqadaha
Sida mid ka mid ah soo saarayaasha waalka hormuudka ka ah ee Shiinaha, COVNA waxa ay ku adkaysanayaan on R & D, design iyo wax soo saarka ee valves tan iyo 2000, iyo ballaarinta ay taxane wax soo saarka si ay u daboolaan baahida warshadaha kala duwan oo ay ka caawiyaan warshadaha xalinta xalalka xakamaynta habka.
Intaa waxa dheer, waxaanu sidoo kale bixinaa taxaneyaal badan oo taxane ah oo valve actuators si loo daboolo baahiyahaaga firfircoonida. Dhaqdhaqaaqayaal kala duwan ayaa kaa caawinaya inaad garato koontaroolka fog iyo hagaajinta isku halaynta injineernimada.
Waxaan ognahay in marmarka qaarkood valves-yada caadiga ah aysan ku habboonayn codsiyada gaarka ah qaarkood. Sidaa darteed, waxaanu codsigaaga ku siinaynaa adeegyo hagaajinta waalka si aanu u hubino in valvebixin kara xalalka ugu fiican ee xakamaynta dareeraha mashruucaaga.
In ka badan 20 sano oo waayo-aragnimo valve ayaa naga caawisay inaan si qoto dheer u fahanno baahiyaha warshado kala duwan. Waxaan noqon doonaa kuwo ku jihaysan warshadaha waxaanan ku siin doonaa xalal dareere ah oo togan. Hadafkayagu waa inaan ka caawino mashruucaaga inuu horumariyo hufnaanta wax soo saarka oo aan sare u qaadno qorshooyinka faa'iidada.
Waxaan si fiican ula soconaa in dhibaatooyin badan lagala kulmi doono habka wax iibsiga, sida hababka lacag bixinta, saadka, gorgortanka iyo wixii la mid ah. COVNA waxay leedahay khibrad in ka badan 20 sano oo ganacsiga caalamiga ah. Marka lagu daro ka caawinta macaamiisha inay doortaan valves iyo actuators ku habboon, waxaan sidoo kale isku dayi doonaa sida ugu fiican si aan u siino macaamiisha waqti-badbaadin iyo habka gaarsiinta alaabta.
Isla mar ahaantaana, COVNA waxay leedahay 2 bakhaar, kuwaas oo si degdeg ah uga jawaabi kara baahidaada valve waxayna ku siin karaan adeegyo gaarsiin degdeg ah.
COVNA waxay leedahay 3 saldhig oo wax soo saar ah iyo 2 bakhaar. Waxaan ku dadaaleynaa inaan siino macaamiisha adeegyada gaarsiinta degdegga ah. Isla mar ahaantaana, kooxdayada iibka xirfadeedcaawin doona ayaa kuu dejinaya jadwal wax iibsiga si loo hubiyo in mashruucaagu aanu dib u dhigin.
Waxaa naga go'an inaan ku siino adeeg heersare ah. Si lagaaga caawiyo inaad sifiican u fahanto sifooyinka waalka oo aad si fiican u isticmaasho valve, waxaanu ku siin doonaa taageero farsamo oo online ah iyo taageero dukumeenti bilaash ah. Rajo inaad ka caawiso mashruucaaga inuu si habsami leh u socdo.
Shahaadooyinku waa habka ugu wanaagsan ee lagu caddeeyo tayada alaabta. Waxaan haynaa ISO9001: 2015, CE, SGS, TUV, FDA iyo in ka badan 30 shati. Habka wax-soo-saarka badeecad kastaa wuxuu si adag u raacayaa heerarka caalamiga ah.
Sanado La Dhisay
Shahaadooyinka & Shatiyada
La shaqaynta COVNA
Ku raaxayso adeegyadayada oo Caawi Gantaalaha Ganacsigaaga
Loogu talagalay Isticmaalaha-Dhammaadka iyo Qandaraaslaha
Dammaanadda Tayada Alaabta
Heerarka wax soo saarka caalamiga ah iyo tijaabinta waxay xaqiijiyaan waxqabadka alaabta
Taageero farsamo si ay kaaga caawiso xallinta xalka
Xalka Dheecaannada Caadiga ah ee Adiga
Waxaan diirada saari doonaa baahiyahaaga waxaanan ku siin doonaa xalal togan
Loogu talagalay Qaybiyeyaasha
Wadaagista Macluumaadka Suuqa
kula wadaaga macluumaadka suuqa si ay kaaga caawiso balaadhinta miisaanka ganacsigaaga
Tababar Aqoonta Alaabada iyo Jawaabta Degdega ah ee Adeegga Iibka Kadib
Tababarka wax soo saarka ayaa kaa caawinaya inaad hesho kalsoonida macaamiisha. Waxaannu si degdeg ah uga jawaabi doonnaa si aan kaaga caawinno xallinta dhibaatada iibka ka dib
Horumarinta Qorshaha Faa'iidada iyo Taageerada Awoodda
Sicirrada tartanka ah si ay kaaga caawiyaan inaad faa'iido badan hesho. Awood wax-soo-saar sare si ay kaaga caawiso hubinta alaabada oo ay ganacsigaaga ka dhigto mid waara
Hel Valfyadaada Aan Lahayn Dalbasho Ugu Yar
Dhismaha C, Longchang Micro-Chuangyuan, No. 26 Hantang Street, Degmada Dongcheng, Dongguan, Shiinaha